Snapchat 10.59.5.0 Beta Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား 25M - 50M
ဗားရွင္း 10.59.5.0 Beta လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
Application မ်ား လူမႈေရး Snapchat
Snapchat ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျစက္ကန့်အတွင်း Snap ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဒါ Snapchat, ကင်မရာမှလက်ျာဘက်ဖွင့်လှစ်! ကိုယ့်တစ်ဦးဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကိုယူမယ့်စာတန်း add, သင်၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကပေးပို့ပါ။ စိစစ်မှုများ, မှန်ဘီလူး, Bitmojis နှင့်ပျော်စရာသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုအတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြ။
• Snapchat ကင်မရာမှလက်ျာဘက်ဖွင့်လှစ်။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ, ဒါမှမဟုတ်စာနယ်ဇင်း ယူ. ဗီဒီယိုကျင်းပရန်ထိပုတ်ပါ။
•သင့်ဓါတ်ပုံကိုတစ်ဦးမှန်ဘီလူးသို့မဟုတ် Filter ကို Add - သစ်တွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆက်ပြောသည်ကြသည်! သငျသညျကွညျ့ရှုလမ်းကိုပြောင်းလဲပါကသင်၏ 3D Bitmoji နှင့်အတူကခုန်လျက်, သင်သည်သင်၏မျက်နှာနှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်ဂိမ်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ။
•ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုထည့်သွင်းဖို့သင့်ကိုယ်ပိုင်စိစစ်မှုများ Create - သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းများကလုပ်မှန်ဘီလူးစမ်း!
•ထိတွေ့နေပါနှင့်တိုက်ရိုက်စာပို့ခြင်းနှင့်အတူသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ Chat, ဒါမှမဟုတ် Group မှဇာတ်လမ်းများနှင့်အတူသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာမျှဝေပါ။
•တခါမှာအထိ 16 သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ Video Chat ။ သင်ပင်စိစစ်မှုများနှင့်မှန်ဘီလူးကိုသုံးနိုင်သည်!
• Friendmojis နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ် Express - သီးသန့် Bitmojis ရုံသင်နှင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
•မိတ်ဆွေများကို Follow နှင့်၎င်းတို့၏နေ့ကဆက်ရေးကြည့်ဖို့သူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းများကြည့်ပါ။
•စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကိုချိုးဖောက်သတင်းများ, မူရင်းရှိုးများ, နှင့်ရပ်ရွာပုံပြင်များ - ပဲသင်၏ဖုန်းအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
SNAP သည့် MAP 🗺
•သူတို့သင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏တည်နေရာ shared င့်ဆိုပါကသင်၏မိတ်ဆွေများထွက်ဆွဲထားကြသည်ဘယ်မှာကြည့်ရှုပါ။
•သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသင့်တည်နေရာကိုမျှဝေပါ, ဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ် Mode ကိုအတူဇယားကွက်ချွတ်သွားပါ။
•သင်အခမဲ့ cloud storage ဖြင့်သိမ်းဆည်းပါတယ် SNAP အပေါ်ကိုပြန်ကြည့်ပါ။
• Edit ကိုနှင့်သူငယ်ချင်းများမှအဟောင်းကိုအချိန်လေးပေးပို့, ဒါမှမဟုတ်သင့် Camera Roll သူတို့ကိုသိမ်းဆည်းပါ။
•သင် Charm နှင့်အတူဘုံရှိအသစ်သောအရာရှာဖွေပါ။ သငျသညျသူငယ်ချင်းသင့်ရဲ့ချဉ်ကြော်လိုက်ဖက်တဲ့, သင့် Bitmojis '' ဖက်ရှင်သဘောမျိုးနှင့်ထို့ထက် ပို. ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးကြည့်ရှုပါ!
•ချစ်ကြည်ရေး Profiles ရုံသင်နှင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးအကြားရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ချစ်ကြည်ရေးကိုအထူးအဘယ်အရာကိုကျော် Bond နိုင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: သူငယ်ချင်းများ, မိသားစုနှင့်အခြား Snapchatters အမြဲဖမ်းယူသို့မဟုတ်ကယ်တင်သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုစခရင်ပုံကိုယူပြီးအသုံးပြုပုံကင်မရာကိုသုံးပြီး, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ SNAP သောအရာကိုအောက်မေ့ကြလော့
Snapchat အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Snapchat အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Snapchat အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Snapchat အား အခ်က္ျပပါ
sf49ers စတိုး 37.71k 12.49M
Snapchat ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Snapchat အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 10.59.5.0 Beta
ထုတ်လုပ်သူ Snapchat, Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.snapchat.com/privacy
ဗားရွင္း: 10.59.5.0 Beta
Release date: 2019-06-13 13:44:01
လက်မှတ် SHA1: 49:F6:BA:DB:81:D8:9A:9E:38:D6:5D:E7:6F:09:35:50:71:BD:67:E7
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Daniel Smith
အဖွဲ့အစည်း (O): Snapchat
နိုင်ငံ (C): 01
Snapchat APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ